Baadhitaanka cusub ee COVID-19 antibody-ka hal ayaa u baahan hal mar 6dii biloodba mar ayaa ciyaarta beddelaysa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Baadhitaanka cusub ee COVID-19 antibody-ka hal ayaa u baahan hal mar 6dii biloodba mar ayaa ciyaarta beddelaysa
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wareysiyo • LGBTQ • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Halista Epitome, oo ah hoggaamiye maareynta halista, tallaabooyinka u hoggaansanaanta COVID, iyo taageerada badbaadada, ayaa ku dhawaaqday in Lisa Wilson loo magacaabay Maamulaha shirkadda sida dhaqsaha u soo koreysa.
Tani waxay noqon kartaa bilowga halbeegga cusub ee tijaabada COVID ee cusub oo loo sameeyay dadka la tallaalay iyo sidoo kale dadka aan tallaalin. Baaritaanku wuxuu tusi doonaa sida jidhkaagu u adkaysan karo qaadista fayraska. Haddii aad wanaagsan tahay, waxay kuu sheegi doontaa sida wanaagsan ee jirkaagu u awoodo inuu ula dagaallamo COVID-19. Baaritaankan waxaa loo baahan yahay hal mar 6dii biloodba mar. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bedel ciyaar iyo badbaadiye nololeed.
Sannadkii hore, kooxda dhakhaatiirta, saynisyahannada, cilmi -baarayaasha, iyo la -hawlgalayaasheeda Epitome Risk waxay ogaadeen in dhex -dhexaadinta unugyada difaaca jirka ay tahay waxa dadka ka ilaaliya COVID.
Dr. Fauci iyo Aqalka Cad waxay isku raacsan yihiin in ogaanshaha tirada ka -hortagga difaaca jirka ee jirkaagu soo saaray tallaalka COVID ka dib ay fure u tahay fahamka heerka ilaalintaada ee ka dhanka ah COVID iyo dhammaan noocyada kala duwan.
Kooxda Epitome Risk waxay diyaariyeen baaritaan aad guriga ka qaadan karto kaas oo ku ogeysiin doona heerka ka-hortagga antibody-gaaga 24-48 saacadood.
Epitome waa shirkad maareynta halista ee fadhigeedu yahay Mareykanka, kuna takhasustay u hoggaansanaanta COVID-19 iyo taageerada amniga. Waa bixiyaha ugu horreeya ee dhexdhexaadinta baaritaannada unugyada jirka.
Lisa Wilson, oo ah maamulaha kooxda Epitome Risk, waxay xarunteedu tahay Florida, USA.
Lisa Wilson waxay marti ku ahayd maanta Bandhigga Wararka Jebinta, soo saaray iyadoo lala kaashanayo Shabakada Dalxiiska Adduunka.
Dr. Fauci iyo Aqalka Cad waxay isku raacsan yihiin in ogaanshaha tirada ka -hortagga unugyada difaaca jirka ee soo saaray tallaalka COVID ka dib ay fure u tahay fahamka heerka ilaalinta shakhsiga ee COVID iyo dhammaan noocyada kala duwan.
Kooxda Epitome Risk waxay soo saareen baaritaan qofka u oggolaan doona inuu ogaado heerkiisa ka-hortagga dhexdhexaadinta 24-48 saacadood. Natiijada baaritaanka noocan oo kale ah waxay u fiican tahay bilaha soo socda ka dib marka la sameeyo waxayna tilmaam cad u noqon doontaa inta ay le'eg tahay in qofku qabto ama ku faafo COVID-19.
Mareykanka wuxuu sii daayay daraasad shalay, Ogosto 18, 2021, oo muujineysa in ka -hortagga tallaalka, ama dhex -dhexaadinta unugyada jirka ka dib markii aad qaadatay tallaalkaaga, uu hoos u dhacayo dhowr bilood kadib.
Heer kasta oo ka -hortagga antibody -ka ayaa hoos u dhacaya heer kala duwan, maxaa yeelay qof walba wuu ka duwan yahay. Dhex -dhexaadinta heerarka antibody -ka ayaa hoos u dhacaya tallaalka aad qaadatayba. Waxaa muhiim u ah dadka inay ogaadaan unugyada difaaca jirka ee dhexdhexaadka ah.
Dhammaan baaritaannada lidka ku ah kuma siiyaan macluumaad isku mid ah. Baaritaanka dhex -dhexaadinta Halista Epitome Risk waa baaritaanka FDA EUA ee suuqa oo si faahfaahsan u ilaalin doona heerkaaga ilaalinta.
"Haddii aad qaadato imtixaanka guriga ama baaritaan kale oo lid ku ah qofka, waa inaad hubisaa in baaritaankaagu uu cabirayo dhex-dhexaadnimada," ayay tiri Lisa.
Halista Epitome wuxuu bixiyaa adeegyo maareyn halis ah, oo ay ku jiraan maareynta halista COVID dadka, ganacsiyada, soosaarka filimada, dhacdooyinka isboortiga, iyo isu imaatinnada kale ee adduunka.
Halista Epitome waxay ku jirtaa geedi socodka xubin ka noqoshada Shabakada Dalxiiska Adduunka waxayna hogaamin doontaa koox cusub oo danaynaysa tijaabada COVID-19.
Dhageyso soo bandhigida wararka maanta ee jebinta.
Diana Nighswonger wuxuu leeyahay,
Ogosto 22, 2021 markay tahay 12:41
Xagee baan u diraa xirmada imtixaankan iyo intee ayay ku kacaysaa?
Carrie wuxuu leeyahay,
Ogosto 20, 2021 markay tahay 06:30
Bal qiyaas waxa…. Wuxuu lahaa COVID bishii Diseembar ee sanadkii hore…. Waxay ku dhowdahay Sebtember iyo unugyada difaaca jirka waa 1.92 %…. Oh oo ma aanan helin “tallaalka”